🥇 Nyocha maka onye na-ebugharị
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 267
Video nke aza ajụjụ maka ebugharị
Nye iwu maka ịza ajụjụ maka mbugharị
Lojistik bụ usoro dị mgbagwoju anya ma na-ewe oge, nke metụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị mmekọ jikọtara ọnụ: ndị ahịa, ndị ọrụ nke ahịrị mmiri na oke osimiri, ndị na-ebu ibu, ndị na-ebu, ndị ọrụ lọjistik, yana ndị nwe ụgbọ ala. Mgbe ị na-enye ọrụ lọjistik, ọ dị mkpa iji nyochaa ọrụ nke onye ọ bụla nwere ọrụ iji hụ na njem dị elu. Akaụntụ ndị na-ebu ibu na-enye gị ohere ịhazi ozi gbasara ndị na-enye ọrụ wee hazie ọrụ na ha, si otú a na-enye aka na nghọta nke usoro lọjistik niile, nchọpụta ezughị oke n'oge na mmepe nke usoro mmezi. Ihe omume USU-Soft nke forwarder na-enye gị usoro nke ngwaọrụ dị iche iche iji melite nzukọ ahụ ma mee ka azụmaahịa gị nwee ọganiihu, yana ịhazi usoro usoro njem niile ma zụlite mmekọrịta nke ndị na-ebu ya ma nwekwuo asọmpi.
Isi uru na ọdịiche dị n'etiti ngwanrọ na mmemme 1C na-emebu bụ doro anya na akpaaka nke arụmọrụ ọrụ yana ntinye ngwa ngwa ha. Gba ajụjụ na usoro ihe omume USU-Soft freight forwarder na-enye ndị ọrụ ohere ịbanye, chekwaa ma melite ozi zuru oke gbasara ndị na-enye ọrụ ụgbọ njem, gụnyere ozi kọntaktị, akwụkwọ, yana ịchekwa usoro ịkwụ ụgwọ na nyochaa ịkwụ ụgwọ. Ga-enwe ekele maka ọdịiche dị n'etiti mmemme anyị nke usoro izizi ihe na sistemụ ndị ọzọ niile, ebe sọftụwia anyị nwere mgbanwe na ịdị mma. Ọ na-nwere a nkecha interface, na ya na ị pụrụ ịnụ ụtọ ala nke arụmọrụ; ọ na-agbanwe maka nkọwa nke azụmahịa ma nwee usoro dị mfe ma nghọta nke nwere ngọngọ atọ. Ngalaba Akwụkwọ ndekọ aha bụ nchekwa data nke ana-akwụ ụgwọ ozi mgbe ị na-arụ ọrụ arụmọrụ na ọnọdụ akpaghị aka. Ngalaba modulu bụ ebe ọrụ ọkachamara nwere ike ịmepụta arịrịọ maka njem na ịzụta ihe ndị dị mkpa, wepụta ụzọ ma gbakọọ ụgbọ elu, yana soro ụzọ nke ngalaba ọ bụla nke ụzọ ahụ. Mkpokọta Nkwupụta ahụ na-enye gị ohere ịmepụta na ibudata akụkọ gbasara ego na njikwa dị iche iche maka oge ọ bụla. Adị ndị isi dị otu a doro anya ma dikwa mma karịa ịza ajụjụ maka ndị na-ebu ibu na mmemme 1C.
Na mgbakwunye, a na-arụ ọrụ nke ngalaba niile na otu akụ. Ndị njikwa ọrụ ndị ahịa ga-enwe ike ijigide nchekwa data ndị ahịa, jiri ya zipu nzipu ozi ma nyochaa irè nke mgbasa ozi. Ngalaba nke lọjistik na-emepụta arịrịọ iji malite usoro njem na ịkọpụta atụmatụ ndị dị mkpa. Ngalaba na-ebugharị na-enwe ike nyochaa ọnọdụ akụrụngwa ma na-achịkwa mmezi nke oge maka ụgbọ mmiri niile. Ndị nhazi na-enwe ike ịlele ma kaa etu esi arụ ọrụ ọ bụla nke ndị na-ebugharị ebugharị. Njikwa dị elu na-enweta ngwaọrụ abụọ iji jikwaa ọrụ nke ngalaba niile yana nyochaa data enwetara iji zụlite usoro na njikarịcha azụmaahịa. Accountgụ ajụjụ maka ndị na-ebugharị ibu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye gị ohere iwepu oge nke ịda mba na-akwadoghị, ebe ị na-adọba ụgbọala na mmefu, yana ịgbanwe ụzọ dị mfe ma nye ntuziaka ọhụụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọrụ maka nkwukọrịta ngwa ngwa na ndị na-ebu site na telephony, SMS na ozi e-mail dịkwa, nke na-egosipụtakwa sọftụwia anyị nke ọma. Nyochaa ọrụ ndị na-ebu ibu na-enye gị ohere ịdekọ ọnụego ndị ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla mepụtara wee si otú a na-enyere aka ịkọwa ọnụego nke onye ahịa ọ bụla ga-akwụ, na-echebara mmefu niile.
Nyocha nke ntinye nke ngalaba ọrụ ọ bụla nwere ike iji ngwa nyocha, yana nyocha nke oge ejiri na nnabata na mmelite nke nzukọ ọrụ. Achịkọtara ozi agbakọtara na ngalaba niile na ngalaba nke ụlọ ọrụ na oge, yana data gbasara ndị na-eweta ọrụ ọrụ yana ụlọ nkwakọba ihe niile. Anyị na-enye gị usoro ịmekọrịta ihe ga-adaba adaba maka inyefe aka na nnukwu ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ n'ihi mgbanwe nke ntọala. Mgbe onye ọrụ gị chọrọ ịrụ ọrụ, ọ na-adị njikere ime ya. A na-emepụta akwụkwọ niile na akpaghị aka, dịka nkwanye ụgbọ njem, mpempe akwụkwọ data ụgbọ ala, na akwụkwọ ndozi. Usoro ndekọ ego maka ndị na-ebugharị na-eme ka usoro niile dị mfe ma na-eme ngwa ngwa, na-eburu kaadị mmanụ ọkụ enyere ndị ọkwọ ụgbọ ala, ụkpụrụ oriri mmanụ, njem a na-eme atụmatụ, ngbanwe oge na mmiri. Akụkụ pụrụ iche nke usoro mmemme maka ndị na-ebugharị ebugharị bụ ikike ịhazi usoro kwa izu nke ibudata na ibudata na ndị ahịa, ndị na-ebugharị, ụzọ, isi mmalite na ebe aga. A na-enye onye ọrụ ọ bụla usoro ihe osise zuru ezu na nke ọhụụ nke ụgbọ elu ọ bụla: onye nyere iwu maka njem, ịdị njikere nke ụgbọala ahụ, kedu ebe a ga-ebuga ya na mbuga ya, onye na-anabata ibu, ma akwụ ụgwọ ma wdg.
Ekele maka ngwa ahụ, ị na-achịkwa nnata nke ịkwụ ụgwọ, usoro ego, na njikwa ụgwọ. Inyocha nchịkọta ego zuru ezu dị mfe site na akụkọ banyere mgbagwoju anya dị iche iche, ngosipụta nke data n'ụdị eserese na eserese na ọnọdụ nke azụmahịa, ụgbọ ala, ụgwọ, wdg. Site na usoro ị na-edekọ usoro ị na-eduzi njikwa arụmọrụ arụmọrụ iji mepụta usoro iji bulie iji bulie ihe ụlọ ọrụ na-eme. Banyere atụmatụ njikọta, sọftụwia nwere ike ịgbakwunye na weebụsaịtị nke nzukọ gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụle arụmọrụ nke onye ọrụ ọ bụla, wee nyochaa ndị ọrụ na sọftụwia ahụ, yana ịchọta ndị ọkachamara kachasị mma na nzukọ gị. Zụlite mmekọrịta gị na ndị ahịa ma debe nchekwa data CRM zuru oke, yana nyocha omume nke arụmọrụ nke ndị ahịa ahịa. Ikike ịchekwa ndebiri maka nkwekọrịta na akwụkwọ ndị ọzọ na-eme ka usoro ịbịaru na ịbanye nkwekọrịta dịkwuo mfe ma na-agba ọsọ.